သဒ္ဓါလှိုင်း: ငါးထောင်တန်ဖုန်းအပေါ် ဘလော့ဂ်ဂါတို့အမြင်(တဂ် ပို့စ်)
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:33 PM
အခုလို မအားတဲ့ကြားက တဂ်ပို့စ်လေးပြန်ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်မရေ
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့် တစ်နေ့တော့ မျှော်လင့်ချက်တွေပြည့်ဝလာကြမှာပါ
တစ်နေ့တော့ တစ်နေ့ပေါ့ ဘယ်တော့လဲ မမေးလိုက်နဲ့ကွယ်
ငါးထောင်တန်ဖုန်းများ အပေါ် အမြင်လေးနဲ့သဘောထားလေးဖတ်ခဲ့တယ်
ပျောက်နေတဲ့မမရေ (၅၀၀၀) တန်ဖုန်းအကြောင်း
ဖြစ်နိုင်မယ် ဆို၇င် အခုတောင် ကိုင်ချင်သေးတယ် ဒါပေမယ် ၅၀၀၀ တန်က မချပေးသေးတာခတ်တယ် ၅၀၀၀ထောင်တန် ဖုန်းနဲ့ ပက်သတ်ပြီးတော့ ဘလောဂ့် ဂါတို့ ၇ဲ့ အမြင်တွေ ကို အကုန်လုံးကို ထောက်ခံပါတယ် ကျွန်တော့ အမြင်ပြော၇၇င် တကယ်သာ လုပ်ပေးမယ်ဆို၇င် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် မဖြစ်နိုင်စ၇ာ အကြောင်းမ၇ှိပါဘူး
ငါးထောင်တန်ဖုန်းများ ပေါ်လို့ကတော့ ၄၆ လုံးလောက် ဝယ်ကိုင်ပစ်လိုက်မယ် အဟ
ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာ တယ်လီဖုန်းကို မတန်တဆ ဈေးနှုန်းမြှင့်ထားလို့ လူတန်းစားခွဲခြားထား ... သလို ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာ အမှန်ပဲ ပေါ့ဗျာ ... ။
အစ်မရဲ့ အမြင်လေး ဖတ်သွားပါတယ် ... ။
သဒ္ဓါရေ။ လူတန်းစေ့ကိုင်ခွင့်ရစေချင်တဲ့ အများရဲ့
ဆင်းကဒ် ၅၀၀၀တန်ထွက်လာရင် လည်ပင်းမှာတစ်လုံးဆွဲမယ်
ဒါကြောင့် ၅၀၀၀တန်ဖုန်းဖြစ်လာဖို့ အရမ်းကိုဆန္ဒရှိပါတယ်း))
တို့ပြည်ကြီးလည်း နိုင်ငံတကာနည်းတူ ပြောင်းလဲသင့်တာ ကြာနေပါပြီ။ ခုထိ ခေါင်းမာနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ တိုးတက်မှုက နှောင့်နှေးနေဦးမှာဘဲနော်။
ညီမ သဒ္ဒါ ရေ
ဖတ်သွားတယ်နော် အောင်ရမည် ရရမည် ငါးထောင်တန်ဖုန်း
Surprise on bloggers' IQ on 5K SIM card campaign !
I want relevant price because free things are most expensive in return.
မရေးရသေးဘူးထင်လို့ လာအော်တာ။ ဟိ ဟိ ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ အစ်မသဒ္ဓါရဲ့ အမြင်လေးကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။
မမသဒ္ဒါရေ ကောင်းသောနေ့လေးနဲ့အတူ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေနော်
တစ်နေ့နေ့တော့ ဖြစ်လာရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။း)
ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ ဆင်းမ်ကဒ် က မြန်မာငွေနဲ့ တွက်လိုက်ရင် 1500တည်းရယ်လေ...
ဒါပေမဲ့..ကျွန်တော့်မှာ 1500ဆင်းမ်ကဒ်နဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး
ဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်လာမှ ဖြစ်နိုင်တာတွေကို ကြိုးစားနိုင်မှာ ...